Dzimwe nyika dzinomisa ndege dzepasi rose pamusoro peiyo COVID-19 musiyano
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Dzimwe nyika dzinomisa ndege dzepasi rose pamusoro peiyo COVID-19 musiyano
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sangano reWorld Health Organisation (WHO) rinoti huwandu hukuru hwekuchinja kwemhando ichangobva kuwanikwa inomutsa kushushikana kukuru pamusoro pekuti zvichakanganisa sei kuongororwa, marapirwo uye majekiseni.
Mutungamiri weEuropean Commission (EC) Ursula von der Leyen, nhasi, vadaidzira nekuchimbidza kuti kufamba kwese nendege kuenda nekubva kune dzimwe nyika dzine nyaya dzakataurwa dzeCCIDID-19 strain dzibviswe kudzamara hurumende nevakuru vehutano vanzwisisa zviri nani njodzi itsva. virus variant poses.
Denmark, Morocco, Philippines neSpain dzave nyika dzichangoburwa kuisa zvirambidzo zvekufamba pane zvese zvisina kukosha zvekufamba.o South Africa nenyika dzakavakidzana, kujoinha rondedzero iri kukura yenyika dzine macurbs pamusoro pe 'super mutant' COVID-19 dhiri.
The European UnionChiziviso chakauya mushure mekunge Denmark neSpain dzabatana nedzimwe nyika dzeEurope mukudzikamisa kufamba kuenda kunharaunda iyi, nepo, pasirese, Morocco nePhilippines vakatora nhanho dzakafanana kudzora kufamba kune boka renyika dzinofungidzirwa kuti dziri panjodzi.
Germany yakazivisa Chamhembe Afrika "nzvimbo inosiyana nehutachiona," gurukota rezvehutano renyika Jens Spahn akanyora paTwitter. Zvinoreva kuti "ndege dzinongobvumidzwa kutakura maGerman" kubva munyika.
Vese vanosvika vaizofanirwa kugara vega kwemazuva gumi nemana, kunyangwe vakabaiwa zvizere kurwisa COVID-14 kana kupora, Spahn akawedzera.
Vakuru veDutch vakaita danho rakafanana, vachizivisa kurambidzwa kwendege kubva kuSouth Africa kuenda kuNetherlands kubva pakati pehusiku.
Italy neCzech Republic dzakakurumidzawo kutevera dzimwe nyika dzeEurope mukuisa zvirambidzo.
Rome yakarambidza kupinda kwevanhu vose vanobva kuSouth Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia neEswatini. Prague yakataurawo kuti vasiri vemunyika vachangobva kushanya kuSouth Africa havabvumidzwe kupinda muCzechia.
Gare gare muzuva, France yakati yaimisa ndege kubva kumaodzanyemba kweAfrica kweanenge maawa makumi mana nemasere, Gurukota rezvehutano, Olivier Veran, vachizivisa kuti vese vachangosvika kubva mudunhu iri vachaongororwa nekutariswa zvakanyanya.
Mutungamiri weFrance Jean Castex akaburitsa pachena kuti nhaurirano pakati pevatungamiriri veEU pamusoro pekuti vangapindura sei kune kuomarara kutsva, uko kusati kwaonekwa mukondinendi, kuri kuitika "mumaawa anotevera".
The World Health Organization (WHO) inoti huwandu hukuru hwekuchinja mune ichangobva kuwanikwa mutsauko unosimudza kushushikana kwakanyanya pamusoro pekuti zvichakanganisa sei kuongororwa, marapirwo uye majekiseni.
UK yakarambidzawo kufamba nendege kuenda nekudzoka kuSouth Africa nevavakidzani vayo, neHealth Security Agency yenyika ichiti "uyu ndiwo musiyano wakaipisisa wataona kusvika parizvino."
Nyika dziri mhiri kweEurope dzave kutyirawo musiyano mutsva uyu, neMalaysia, Japan, Singapore neBahrain vachiisa zvirango kune vafambi vanobva mudunhu rekumaodzanyemba kweAfrica.
Izirayeri akaisawo kurambidzwa kwevanosvika kubva maodzanyemba e Africa asi ndokuwedzera 'nzvimbo dzvuku' iyoyo kusvika kunenge kondinendi yose, tisingabatanidzi dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica.